Ha hilmaamin in aad saacada badasho! | Somaliska
Ha hilmaamin in aad saacada badasho!
Sida ay la socdaan dadka ku nool Sweden, saacada dalka ayaa la badalaa 2 waqti iyadoo marna lagu daro 1 saac marna laga jaro. Habeenka Axada ugu dambeysa bisha Maarso ayaa 1 saac lagu daraa saacada Sweden, ayadoo saacada marka ay tahay 2:00pm is badalka la sameeyo oo laga dhigo 3:00pm.
Saacada ayaa laga jaraa Habeenka Axada ugu dambeysa ee bisha Oktobar taasoo ku beegan 28 Oktoobar 2012 ayadoo marka saacada ay tahay 3:00pm laga dhigi doono 2:00pm.
Arintaan ayaa aad muhiim ugu ah in ay ogaadaan dhamaan dadka ku nool Sweden ayadoo tani saameeyn wayn ku yeelanayso saacadaha shaqada, iskuulada , tareenada iyo dhamaan qaybaha nolosha.
Hadaba ha iloobin in aad saacadaada ka jarto 1 saac, maalinta Axada ee bisha ku beegan tahay 28, Oktober. Kombuyuutarada ayaa iskood isaga jari doona saacada.
Nin magangalyo doon ah oo ka soo booday dabaqa lixaad
October 27, 2012 at 11:06
waa mahadsan tahay jimcaale waxaan kuugu hambalyeeynayaa sida aad macluumaadka loo baahan yahay bulshada ugu soo gudbiso.
October 27, 2012 at 13:59
wad mahadsantahay sxb jimcale waxan kuurajeya shaqadada iyo tabinta ad utabiso somalida kuhadasho afkasomaliga midad uwanagsan
ood waxbadan kabadasho
xog aruurin adkusameyso
aa heey says:
ma lagu deraa mise waa laga jaraa ?
SAAXIIB CIID WANAAGSAN MARKA HORE,KADIB ADIGA OO RAALI AH WAA 02.AM EE MAAHA PM.MAHADSANID
October 28, 2012 at 02:35
waa mahadsantahay Jimcale
October 28, 2012 at 14:03
tack så mycke jimcaale illaahaay haku xafido aamiin
dadka jooga afrika ayagana saameyn ayeey kuyeelaneysaa arintan sababtoo ah marki hore waxaan kutashanayay markaan hawada sweden soogalo inaan halsaac kajaro saacadii afrika aan ku isticmaalayay lkn hada labosaac waa inaankajaraa sow ma ahan by kkkkkk